Wararka Ciyaaraha HNN – Page 23 – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Home»Archives»Wararka Ciyaaraha HNN (Page 23)
Paul Merson oo ku weeraray Arsenal qaabka ay ula dhaqamayso Aaron Ramsey
By admin on 03/11/2018 Wararka Ciyaaraha HNN
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Halyeeyga kooxda Arsenal ee Paul Merson ayaa dhaleeceeyay qaabka loola dhaqmayo Aaron Ramsey. Arsenal ayaa ku wargalisay Ramsey inuu raadsado koox uu ku biri karo suuqa Janaayo kadib markii uu dalbaday in la siiyo mushaar dhan 275 kun oo Ginni isbuucii. Paul Merson ayaa u sheegay Arsenal in Ramsey uu yahay xiddig muhiim […]
Andrea Pirlo oo si weyn u amaanay Cristiano Ronaldo kahor kulanka caawa ay la ciyaari doonaan kooxda Cagliari
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Juventus ayaa dooneysa in ay halkeeda kasii wadato sida adag ay kaga bilaabatay horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga, kadib markii ay caawa ku soo dhaweyso Allianz Stadium kooxda Cagliari, si ay u wada ciyaaraan kulankooda 11-aad ee horyaalka. Bianconeri ayaa ilaa iyo haatan xili ciyaareedkan qaab ciyaareed wanaagsan ku bilaabatay, […]
PSG oo durba war ka soo saartay fadeexadii la faafiyay!!
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Kooxda PSG ee dalka France ayaan la daahin inay jawaab ka bixiso fadeexadii ku habsatay iyaga iyo Manchester City. Football Leaks ayaa fakiyay sir ahayd in Michel Platini iyo Gianni Infantino ay ka caawiyeen kooxaha PSG iyo Man City inay jabiyaan sharciga dhaqaale wanaaga kooxaha yurub. Waxay ahayd in ganaax culus la […]
Fadeexo ruxday kubadda cagta yurub oo daaha laga qaaday
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Majalada dalka Jarmalka ka soo baxda ee Der Spiegel ayaa daaha ka qaaday macluumaad ruxaya kubadda cagta yurub. Der Spiegel oo soo xiganaysa barta faafisa siraha qarsoon ee Football Leaks ayaa daaha ka qaaday war ka yaabiyay kooxaha yurub. Majalada ayaa baahisay in madaxdii UEFA ee Michel Platini iyo Gianni Infantino ay lacago ka […]
Mourinho oo hal arin ugu baaqay Martial kahor kulanka maanta ay la ciyaari doonaan kooxda Bournemouth
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Tababaraha kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa amaanay weeraryahanka reer France Anthony Martial, wuxuuna ugu baaqay inuu qandaraaska u kordhiyo Red Devils. Anthony Martial ayaa wuxuu dhacayaa heshiiska uu ku joogo garoonka Old Trafford dhamaadka xili ciyaareedkan, macalinka reer Portugal ayaana doonaya inuu qeyb kasii noqdo qorshihiisa kooxda Manchester United. […]
Barcelona oo xiddigaan ka doonaysa dhigeeda Bayern Munich
Sabti, November, 3, 2018(HNN) Barcelona ayaa diirada saaratay daafaca kooxda Bayern Munich iyo xulka Germany ee Joshua Kimmich. Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in daafaca midig ee Bayern Munich uu hogaaminayo liiska xiddigaha Barcelona ay ka doonayso suuqa kala iibsiga. Barcelona ayaa u aragta 23 jirka reer Jarmal laacib si wayn ugu haboon qaab ciyaareedka […]